No. 9 The Byron - 2 Bedroom Prestige Apartment - I-Airbnb
IApartment eNtsha eyenziwe kakuhle yaseBryon Prestige yavulwa ngo-2016. Iphangalele, ukukhanya okuzaliswe kumbindi we-Inverell's CBD ibonelela ngabucala ngaphandle kwesitalato sokupaka kunye nomnyango osuka eEvans Street.
Ifanelekile isibini okanye umntu oqeqeshiweyo oza e-Inverell ukuhlala ixesha elifutshane okanye elide.
Ngegumbi lokulala eli-1 lokumkanikazi ophambili, kunye negumbi lokulala eli-1 elincinane lesibini / igumbi lokufunda, ikhitshi, igumbi lokuhlambela, indawo yokuhlamba impahla, indawo yokuhlala ephangaleleyo kunye nendawo yokutyela kukho indawo eninzi yokuphumla kunye nokuphumla kunye nendawo eqhelekileyo yangaphandle ene-BBQ.
Le ndlu ibekwe kumgangatho wokuqala weByron Arcade Building kwaye inika zombini izitebhisi kunye nokunyuswa kokufikelela. Iisilingi eziphakamileyo ezineefestile ezinkulu, igumbi lokuhlala libonelela ngesicwangciso esivulekileyo sokuhlala kunye nekhitshi eligcweleyo, indawo yokuhlala kunye neyokutyela, igumbi lokuhlambela elineshawa yodidi kunye nokufudumeza okuphantsi komhlaba, indawo yokuhlamba impahla, kunye negumbi lokulala libonelela ngebhedi ekhululekileyo yokumkanikazi kwigumbi lokulala elikhulu kunye nebhedi encinci kwigumbi elinye. igumbi lokulala lesibini / isifundo. Ukukhanya kwayo kunye nokukhanya okuzaliswe yi-air-conditioning, iifeni zesilingi kunye nokufudumeza ngaphantsi kumagumbi okuhlambela. Khusela indawo yokupaka esezantsi kunye nokufikelela kwi-intercom.
Ifakwe ngaphakathi kwendawo yobugcisa kunye neyenkcubeko yase-Inverell, malunga neHolo yeDolophu.